Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo sheegay in madaxweyne Farmaajo la aamin karin | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo sheegay in madaxweyne Farmaajo la aamin karin
Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo sheegay in madaxweyne Farmaajo la aamin karin
Hogaamiyaha Xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa qoraal uu soo saaray kaga hadlay aragtidiisa ku aadan shirka Dhuusomareeb 3 asigoona sheegay habka uu shirkaasi ku qabsoomi karo hadii loo baahanyahay in xalwaara la faaro.
Abdirahman Abdishakur ayaana sheegay in marka waajib tahay magacaabida Ra’iisul wasaare soo dhisa xukuumad hirgaliso qodobada lagu heshiiyay sidoo kalana beesha caalamka ay damiin ka noqoto Madaxweyne Farmaajo maadaama aanan go’aankiisa la isku haleyn karin.
Qoraalka Hogaamiyaha Xisbiga Wadajir halkaan hoose ka akhriso;
“Ma aha in la isku qaldo gogol, guddoon iyo go’aan.
Si gogosha loo badbaadiyo waa in Madaxweyne Farmaajo uu Raysalwasaare magacaabo, madaxweynaha Galmudug-na uu dadka maqan doono, beesha caalamkana caddeyso in ay Farmaajo damiin ka tahay.”